SIMBA UYE ELEGANT KETTLE - Iyo kettle inounza nyaradzo uye dhizaini kukicheni yako. Neketani ine simba yesimbi isina tsvina iwe unogona kugadzira tii, kofi, soups uye zvimwe zvakawanda. Kunyanya kuchengetedzeka kuvonga kune kupisa-inodzivirira kunyoro-kubata pamusoro uye mukati memba yakagadzirwa nekudya-yakachengetedzeka simbi isina tsvina. Dhizaini yemazuva ano yemubiki wemvura mune matatu akasiyana mavara akasiyana, ingave kettle yakasviba, chena kana grey, inokodzera mukicheni yega yega uye mukamuri.
Mutiluction Lantern: Iri rambi remusasa rinoshandiswa zvakasiyana-siyana. Inogona kunge iri tochi, mwenje, mwenje kana emergency tsvuku strobe mwenje. Inogona kugutsa zvido zvezviitiko zvese uye kuva izvo zvaunoda.
Kupenya Kune Simba uye Range: Iyi LED rechargeable lantern ine kupenya kwepamusoro uye yakakwirira mhando. Inogona kukupa mwenje wakakwana panguva yekudzima kwemagetsi uye mwenje wakajeka mukati me500m kana uchifamba murima kunze.
DRY AIR RELIEF! USATARIRA ZVAKARE KUNYANYA KUNYANYA KUNYANYA KUNYANYA MIST HUMIDEFIER PAMAKE! Unoda kubvisa kutambura kubva pamigumisiro inotyisa yemhepo yakaoma? Hapana chikonzero chekunetsekana neyakachipa flimsy uye leaky desk humidifiers. Iyi mhando ye ultrasonic humidifier ndiyo yauri kutsvaga. Inopomba zororo nekukurumidza uye zvinobudirira! - Inzwa zviri nani mumaminitsi!
Multifunctional Night Mwenje uye Mwenje: Semwenje wetafura, unogona kugadzira mhepo inonyaradza uye yerudo, yakanakira kushongedza uye kuvhenekera imba yako yekurara, yekutandarira, hofisi uye chero kona yeimba uye yekutengeserana nharaunda. Chii zvakare, chinogona zvakare kushandiswa kuCambing, BBQ, Emergency Situations uye zvimwe zvinodiwa Mwenje.
Unique Lantern Dhizaini - KENNEDE mwenje wemusasa wakagadzirwa nerambi rine simba, uye dhizaini yese ndeyekutanga yakagadzirwa naKennede mainjiniya.
Battery Operated Desk Lamp: Yakashongedzerwa nebhatiri rakavakirwa-mukati, hapana chikonzero chekubatanidza paunenge uchishandisa, tambo isina tambo uye inotakurika kuenda chero kupi zvakasununguka, kunyanya kune mishoma yekubuda uye kupera kwemagetsi kunoitika (Ndokumbira utarise kuti mwenje unofanirwa kubhadhariswa kuchengetedza Upenyu hwebhatiri kana nguva refu isingashandisi)
Dimmable Kubata Kudzora Tafura Mwenje: Bata inotaridzika kutonga ine 3-nhanho kupenya kuchinjika, yakanakira kuverenga, kushanda, kudzidza, kugadzira, kuratidza, kumisasa kana kushandiswa kwekukurumidzira, yakakodzera kukoreji dorm, hofisi, yekurara, imba yekutandarira, imba yevana, imba yekugezera, etc
KUSVIRA & KUNE SIMBA KUPIYA - Yakashongedzerwa neyepamberi ceramic yekudziya zvinhu, Teioe diki nzvimbo hita inopa nekukurumidza uye yakawanda simba rinoita kupisa. Iyi electric space heater inopisa kusvika 70°F mumasekonzi matatu, yakakwana nzvimbo hita yekurara, hofisi uye kushandisa dhesiki.
Iyo HEPA chizvarwa chitsva chemhepo inochenesa mweya yekuchenesa neMhepo Pretreatment System Bvisa Utsi, Pollen, Dander Yemba, Kamuri yekurara, Kamuri yekutandarira, Kicheni.
kana iyo sefa inoda kuchinja, chiratidzo chitsvuku chinovhenekera kuti chiyeuchidze.
Pedestal fan, Oscillating Fans, Electric Fan, Adjustable Standing Fan yekutonhodza
SIMBA & KUNYARA KUPORORA: Iyi feni inoratidzira kaviri blade kumisikidzwa ine 3 yekumhanyisa marongero & oscillation yenzvimbo yakafara yekutonhora mukati memakamuri makuru; Inoratidza zviri nyore kushandisa zvidzoreso zvemagetsi zvinosanganisira auto off timer pamwe neremote control
CUSTOMIZABLE COOLING: Iyi fan inopa oscillation yekutonhodza mukamuri yese pamwe neyakasiyana inogoneka chiitiko ine 3 magetsi marongero uye 3 sarudzo dzemhepo: inoshanduka, inofefetera uye isingachinji; Remote control inoita kuti zvive nyore kushanda kubva mhiri kwekamuri
Electric Kettle Temperature Kudzora Girazi Tea Kettle
Precise Temperature Kudzora Magetsi Kettle]: Gadzirisa akasiyana smart zvirongwa zvekukwira tii patembiricha chaiyo. Iyi keturu yetii yemagetsi inopa chaiyo tembiricha yekudzora (160℉-200℉) kuti uwane yakanyanya kunaka, yakanyanya kunaka tii, kofi kana kungobika mvura yekubikisa. Uye zvakare mudziyo wakakwana weoatmeal, pasta, zai, mukaka unodziya uye disinfection.
10-22 mabasa ane simba - iyo AWK-701 inoratidzira gumi nematanhatu zvirongwa zvekugadzira akasiyana siyana etii, tii yemichero, zvechinyakare zveAsia zvekubika, nezvimwe. Pamusoro peizvi, zvidzoreso zvine mabasa mazhinji, zvichikutendera kuti ugadzire zvinhu zvakasiyana-siyana zvisina kunyorwa mune ino revolutionary kettle yemvura.
KENNEDE brand air purifier yekushandisa Imba hombe kamuri
H13 Yechokwadi HEPA Sefa Yekuchenesa yeAllergies uye Zvipfuwo, Vanoputa, Mold, Pollen, Guruva, Chinyararire Anonhuwa Emukamuri yekurara.